स्त’न सानो वा ठूलो हुँदैमा यौ’न सन्तुष्टि पनि तल–माथि हुने हो ? – Sanjal Nepal
Homeरोचकस्त’न सानो वा ठूलो हुँदैमा यौ’न सन्तुष्टि पनि तल–माथि हुने हो ?
स्त’न सानो वा ठूलो हुँदैमा यौ’न सन्तुष्टि पनि तल–माथि हुने हो ?
November 19, 2020 admin रोचक 5891
यौ’न स्प’र्श, चु’म्बनजस्तै स्त’न दृ’श्यपा’न तथा स्प’र्श पनि यौ’न सम्पर्क कायम गर्नुअघि प्रा’क्क्रीडाको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। महिलाको स्त’न पुरुषका लागि यौ’न आ’कर्षण गर्ने अं’ग हो। ज्यादै भद्दा, निकै सानाभन्दा मध्यम खालको व’क्षस्थ’ल अनि मु’न्टा नै प्रष्टिने, दुई स्त’न बीचको खो’बिल्टो (गु्रभ) देखिने पहिरन लगाएका महिलाका व’क्षस्थ’लमा तुलनात्मक रूपमा बढ्ता आँखा पुग्ने गर्छन्। त्यसैले भी’डभा’ड तथा सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरू आफ्नो स्त’न जोगाउन प्रयत्नरत हुन्छन्।
निकै ठूला र साना स्त’न हुँदा ही’नताबोध महसुस गर्ने हुनाले स्त’न महिलाहरूका लागि व्यक्तित्वको पहिचान पनि हो। त्यसो भएर होला, थुप्रै महिलाले आफ्नो व’क्ष निश्चित आकार–प्रकारमा राख्न कोसिस गर्छन्। साना वा ठूला आकारका स्त’नलाई आजभोलि प्लास्टिक सर्जरीबाट ठीक साइजमा ल्याउनेहरू पनि छन्।
तुलनात्मक रूपमा साना आकारका स्त’न भएकामा बढ्ता हीनताबोध हुन सक्ने हुनाले उनीहरू सि’लिकन प्रयोग गरी स्त’नको आकार बढाउने गर्छन्। कतिपय ख्यातिप्राप्त मोडल तथा अभिनेत्रीले यही प्रविधिबाट स्त’नको आकार बढाउने गरेको पाइन्छ।
व्यावहारिक तवरमा विवाहपछि श्रीमान्ले पटक–पटक स्त’न खे”लाउनाले स्त’नको आकारमा वृद्धि भएको पाइन्छ। त्यसो भएर आधुनिक समयमा स्त’नको आकारलाई लिएर वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नै नहुने वा श्रीमतीको सानो आकारको स्त’नलाई लिएर पु’रुष पा’र्टनरले खिन्नता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
महिलाका विभिन्न शा’रीरिक अं’गमध्ये पुरुषले सबैभन्दा पहिला नजर पुर्‍याउने अं’गमा व’क्षस्थल नै होला।
पछाडिबाट भने नि’तम्ब हुन सक्छ। एक अध्ययनअनुसार ९५ प्रतिशत पुरुषले आपसी भेटका क्रममा महिलाको व’क्षस्थ’लमै नजर पुर्‍याउँछन्।
प्रायःजसो पुरुषले महिलासँग कुराकानी गर्ने क्रममा पटक–पटक महिलाको व’क्षस्थ’लमा आँखा पुर्‍याउँछन्। महिलाको व’क्षस्थलप्रति किन पुरुष यति आ’कर्षित हुन्छन्? सायदै कसैले प्रष्ट उत्तर दिन सक्छ।
स्त’न के हो?
महिलाको जीवन बालिका, किशोरी, युवती हुँदै वृ’द्धावस्थासम्म चरणबद्ध रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। यसबीच प्र’जनन उमेर (१५ देखि ४५ वर्ष) मा प्रत्येक महिना इ’स्ट्रोजेन र प्रो’जेस्टेरोन नामक हर्मो’नका कारण महिलाका भित्री प्र’जनन अंग (पा’ठेघर, डि’म्बाशय, डिम्बवाहिनी नली) का साथै सहायक यौ’नांग स्त’नमा परिवर्तन आउँछ।
त्यसो त १० देखि १५ वर्षसम्ममा बाल्यावस्थाबाट कि’शोरी अवस्थामा प’रिणत हुन्छ।
किशोरी अवस्थामा पुग्ने क्रममा चार वटा मुख्य परिवर्तन आउँछन्। यस क्रममा शा’रीरिक परिवर्तन आउने, यौ’नांग तथा का’खीमा रौँ पलाउने तथा म’हिनावा’री सुरु हुनेजस्तै स्त’न बढ्ने पनि एक हो। यौ’वनावस्थामा हुने शा’रीरिक परिवर्तनमा उचाइ एवं तौल बढ्छ, अनुहार चिप्लो हुन्छ, डन्डीफोर आउँछ, का’खीमुनि र जनेन्द्रियवरिपरि रौँ उम्रिन्छन्।
यो’नि स्रा’व बढ्न थाल्छ। प्रत्येक महिना र’जस्वला हुन थाल्छ। अन्य व्यक्तिलाई पनि महसुस हुने गरी स्त’न बढ्न थाल्छ। स्त’न वृद्धि तथा काखी एवं यौ’नांगवरिपरि रौँ पलाउने कार्यलाई चार चरणमा व’र्गीकृत गरिन्छ। किशोरी अवस्थामा स्त’नमा हुने यी परिवर्तन व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक समयमा हुन सक्छ।
किशोरीको १६ वर्ष पुगेपछि यौ’नांग राम्ररी विकसित नहुनु, यौ’नांगवरिपरि र काखीमा रौँ भइसकेपछि म’हिनावारी सुरु नहुनुलाई राम्रो मानिँदैन। १४ वर्षको उमेरसम्म म’हिना’वारी सुरु नहुनुलाई राम्रो नमानिएजस्तै १६ वर्षको उमेरसम्म पनि स्त’नको विकास नहुनु राम्रो ल’क्षण होइन। कतिपय अवस्थामा कि’शोरी वि’शेषको जन्मजात स’मस्यासँग पनि गाँसिएको हुन सक्छ।
फाँडो देखाउँदै उनले भनेछोराछोरी मासु खाने भन्छन् ! यहाँ आलु ल्याउने त पैसा छैन कसरी खुवाउनु मासु
December 10, 2020 admin रोचक 3246
काठमाडौं । यौ*न दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ । तनावपूर्ण जीवनशैली र
February 6, 2021 admin रोचक 6390
November 13, 2020 admin रोचक, समाचार 24855
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका
LEX 18 agenda conversation: Job club (541151)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511675)
Hello world! (433332)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (395889)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131050)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (104056)